Ciidamada amniga oo weeraray saldhig ay Al-shabaab ku lahaayeen Shabeellada hoose. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamada amniga oo weeraray saldhig ay Al-shabaab ku lahaayeen Shabeellada hoose.
Ciidamada amniga oo weeraray saldhig ay Al-shabaab ku lahaayeen Shabeellada hoose.
Muqdisho-(SNTV)-Hawlgal qorshaysan oo Ciidamada ammaanka ay ka fuliyeen Habeennimadii Xalay, kana dhacay degaanka Daaru-salaam ee Gobolka Shabeellada hoose ayaa lagu dilay 8 ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
Degaanka Daaru-salaam ayaa Argagixisada Al-Shabaab u ahayd muhiim, halkaas oo ay ku diyaarinjireen Qaraxyo, waxanay sidoo kale u ahayd Il dhaqaale oo ay ku uruursan jireen Lacagaha baadda ah ee ay ka dhacaan Shacabka.
Ciidamada amnigu Soomaaliya ayaa ka mahad celiyay muwaadiniinta wanaagsan ee ka Gacan siiyay dagaalka ay kula jiraan cadawga, waxana sheegeen in ay ugu tagayaan Argagixisada goobahooda kana qaadayaan tallaabada ku habboon.
Waa hawlgalkii Sadexaad muddo Toban bari gudahood ah oo ay Ciidanada Qaranku ka fuliyeen goobaha ay joogaan Al-Shabaab, kaas oo muujinaya sida ay Ciidamadu u awoodaan in ay ku beegsadaan argagixisada goob kasta oo ay joogaan
Previous articleAl-Shabaab oo Dad ka Af-duubtay Gal-gaduud
Next articleRa’iisul Wasaare Khayre “Waa In Aan Leenahay Qorsha Shaqo Oo u Adeegaaya Dadka Oo Dhan”